Global Voices teny Malagasy » Pakistana: Mandria Am-piadanana Mehdi Hassan, Mpanjakan’ny Ghazal · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Jona 2012 1:55 GMT 1	 · Mpanoratra Omid Bidar Nandika miora
Sokajy: Azia Atsimo, India, Pakistana, Mediam-bahoaka, Mozika, Zavakanto & Kolontsaina
Nodimandry  ny Alarobia 13 Jona 2012 tany aminà trano fitsaboana iray tany amin'ny tanànan'i Karachi any Pakistana i Mehdi Hassan Khan , fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe ‘Mpanjakalahin'ny Ghazal’, taorian'ny aretina nitarazoka. Efa 12 taona ilay mpihira ny Ghazal  84 taona no narary.
Taorian'ny fahalasanany, nalaza be tao amin'ny Twitter manerana an'i Pakistana sy India ny ‘#MehdiHassan’. An-jatony amin'ireo mpankafy azy, isan'izany ireo mpihira malaza, olo-malaza sy mpanao politika, no nizara ny fiaraha-miorin'izy ireo ary manome voninahitra ilay mpihira malaza. Mizara ireo hira Ghazals nataony malaza indrindra ireo mpankafy azy any anatin'ireo tambajotra sosialy.
Manoratra mizara ny alahelony lalina ny Praiminisitra Indiana Manmohan Singh (@PMOIndia) ao amin'ny Twitter :
@PMOIndia : Ny dindon'ny fankafizany ny tononkalo Urdu sy ny fandalàny fatratra hatrany aloha ny fomban-drazana Dhrupad dia nanome azy toerana iray voatokana tao anatin'ny tontolon'ny mozika.
Mitoraka bitsika momba ny tsiarony an'ilay mpihira Gahzal malaza ilay mpilalao sarimihetsika Indiana malaza, Shahrukh Khan (@imsrk):
@imsrk:  tsiaro an'ny reniko mahandro sakafo anatina lakozia maloto raha avy ny orana tany ivelany, raha nihevaheva teo amin'ny Beltek 2 no 1 (mpamaky horonampeo) i mehdi hassan.
Sary nalaina tao amin'ilay lahatsary : Roz kehta hoon bhool jaon avy amin'i KhurramDBG
Nanolotra ny fiaraha-mioriny tamin'ny fianakavian'i Mehdi Hassan ilay mpihira Lata Mangeshkar tamin'ny resany ho an'ny media ary nilaza  fa fahaverezana be teo amin'ny tontolon'ny mozika ny fahalasanany.
Milaza  i Asif Noorani avy ao amin'ny bilaogy Dawn:
Lasa i Mehdi Hassan, nefa tsy ory aho. Aza manozona ahy raha miteny aho fa maivana ny tenako, noho ny nanalan'ny fahafatesana ny aretiny efa naharitra amam-polo taonany. Namaky ny foko ny nahita azy mandry tsy afaka ampiana sy tsy miteny, iharan'ireo aretina maro, raha tsy iresaka ny momba ireo ratra nateraky ny fandriana.
Mitoraka bitsika i Adil Omar (@Adil_Omar):
@Adil_Omar :Tsy ilaza ho nihaino ny hirany aho, nefa nahafantatra ny toe-pahasalamany sy ny vokany. Mandria am-piadanana ry Mehdi Hassan
Mamisavisa  ny fihetseham-pony ny mpihira Talat Aziz, izay nofanin'i Mehdi Hassan:
Mahatsapa manokana fahaverezana lalina aho. ‘Shagird’-any (mpianany) aho, nandany ny ankamaroan'ny androko niaraka taminy. Ho ahy dia kintana izy. Tsy ato am-bavako ireo teny hamaritako ny fahalasanany. Reharehan'ny tontolon'ny Ghazal ny tenany. Na tsy nihira intsony aza izy fotoana vitsy lasa izay, halahelo azy ny olona. Tsy hisy Mehdi Hassan iray hafa intsony.
Manentana anao hitsidika ny Fanomezam-boninahitra an'i Fawad  an'i Mehdi Hassan, izay raisiny ho iray amin'ireo mpihira iray goavana indrindra any amin'ny soba-kaontinanta nandritra ny vanim-potoana fivakisana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/06/17/34330/
 Fanomezam-boninahitra an'i Fawad: http://pakistaniat.com/2009/11/29/khan-sahib-mehdi-hassan-khan-the-sound-of-perfection/